Abstract: Hlanganyela, Uhlobo, kanye neHandoff Imiklamo Yomkhiqizo Wakho | Martech Zone
Abstract: Bambisana, Uhlobo, kanye ne-Handoff Imiklamo Yakho Yomkhiqizo
Sisebenza nenkampani kazwelonke njengamanje ukuthuthukisa amathempulethi we-imeyili wokukhangisa wangokwezifiso womnyango ngamunye kanye nezinyunithi zebhizinisi. Ngoba ababambiqhaza, osonkontileka, nabaqambi konke bakude, umklami waqamba izindlela zakhe wasebenza ngezinhlobo nethimba lakhe lobuholi - wabe eselinikeza ithimba lethu ukuze lisabele ngokufaka amakhodi nokusebenza kwalo.
Umklami ungazise ku-Abstract. abstract iyithuluzi lokusebenzisana eliku-inthanethi le-Mac lapho inkampani yakho, osonkontileka, namakhasimende bekwazi ukuphatha, ukwenza inguqulo, nokuqamba imibhalo endaweni eyodwa.
Ukuhlela noma ukudala amafayili wedizayini, uzodinga ukwenza lokhu landa uhlelo lokusebenza lwe-MacOS desktop. Ukwabelana nokuthola impendulo, uhlelo lokusebenza lwedeskithophu livumelanisa ne- Uhlelo lokusebenza lewebhu le-Abstract.
Inqubo Yokuhamba Kwendlela Abstract
I-Abstract inika amandla ithimba lakho ukuthi lisebenze lisuka enkosini, egatsheni, libambisane, linikeze impendulo kuyo yonke indlela ukulungiselela umklamo womkhiqizo wakho ovunyelwe ukukhiqizwa.
Ngenisa - ukungenisa Sketch futhi I-Adobe XD amafayela bese wenza ngokushesha indawo eyodwa yomsebenzi wakho wokuklama usesikhathini samanje kanye nemibhalo esekelayo.
Bambisana - Qala ukuhlola ngokwakha igatsha kude nenkosi ukuklama ezindaweni zokusebenza ezifanayo. Amagatsha ayizikhala eziphephile lapho wena nabanye abaklami ningasebenza kumafayili afanayo ngasikhathi sinye, ngaphandle kokubhala ngaphezulu umsebenzi womunye nomunye noma ukuthinta okuyinhloko.
Yenza - Bhala futhi ugcine umsebenzi wakho ngokuqukethwe okungeziwe, ukwakha imibhalo njengoba uhamba. Kufaka amanothi ngalokho okwenzile nokuthi kungani kuyingxenye yokonga umsebenzi wakho ku-Abstract.
Impendulo - Cela impendulo kwabanye abaklami nababambiqhaza, ngqo emsebenzini. Ukuphawula nezichasiselo kuyarekhodwa kumabhodi wobuciko ukuze kutholakale kalula.
Inguqulo - Ngemuva kokuthi ukwakhiwa kuvunyelwe futhi kulungele ukuqhubekela phambili, isinyathelo esilandelayo ukuhlanganisa, noma ukufaka, izinguquko zakho zibe yinkosi. Ungaqhathanisa izinhlobo ezahlukahlukene zamabhodi wobuciko ngaphambi kokunquma ukuthi iziphi izinguquko ofuna ukuzilondoloza ukuze uzenze kahle nokuthi yiziphi ongazenzi. Futhi, uma ushintsha umqondo wakho noma wenza iphutha, ungahlala ubuyela emuva kunguqulo yangaphambilini.
Production - Umsebenzi wezinguquko kusuka ekwakhiweni uye ekuthuthukisweni ngqo kusuka ku-Abstract. Abathuthukisi bangaqhathanisa izinguquko, babuke izilinganiso, futhi balande amafa - konke kusuka kusixhumanisi. Ukufinyelela kombukeli yikho konke abakudingayo (futhi kumahhala).
Abstract unikela ngeminikelo ejwayelekile futhi ehlanganisa konke.
Qala Isivivinyo Sakho Sezinsuku Ezi-14 Hlela Idemo ye-Abstract Demo
Tags: abstractadobe xddesignimpendulo yomklamogconaumklamo womkhiqizoimpendulo yomklamo womkhiqizoSketchuiimpendulo ye-uiukwakheka kwesikhombimsebenzisi somsebenzisiukulawula inguqulo
I-infographic: Izindlela Zokuxhumana Zikuthonya Kanjani Ukuphila Kwethu